[फरक सिरिज] सिंहदरबार अन्डरडग्स: अर्थमन्त्रीका ड्राइभर भन्छन्– अरू जागिर लाइदे भन्छन्, आफ्नै ठेगान छैन
सिंहदरबार गेटमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति छ । उनीहरू सिहंदरबार प्रवेश गर्ने सबैको एक–एक गरी परिचयपत्र चेकजाँच गरिरहेका छन् । ‘आज गृह मन्त्रालयका करारका कर्मचारीलाई भित्र जान दिएको छैन ।&rs...
तथ्यांकसँग किन तर्सिए अर्थमन्त्री खतिवडा ?
काठमाडौं– विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनसँग तर्सिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकका प्रतिनिधिसँग रोष व्यक्त गरेका छन् । केही हप्ताअगाडि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको लगानीको अवस्थासम्बन्धी रिपार्ट &lsq...
काठमाडौं– सरकारले मंसिर ११ गते निकै तामझामसाथ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनायो । श्रमिकले पारिश्रमिकका आधारमा सामाजिक सुरक्षा पाउने भएकाले यसलाई योगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा भनेर प्रचार गरियो । तर, विज्ञह...
सास्ती खेप्दै जनता, सरकार भन्छ –विश्वमा देश चिनाउन दुःख उठाउनुस्
सानु राजथला निकैबेरदेखि रत्नपार्कमा गाडी कुरिरहेकी थिइन् । लामाटार जान लागेकी राजथला अरु दिन १०–१५ मिनेटमै गाडी भेट्थिन् । सडकमा सधैँभन्दा कम गाडी गुडेको देखेपछि उनलाई लाग्यो, ‘मन्त्री, प्रधानमन्त्...
हाम्रो समाजमा पुँजीवाद र विवाहको समाजशास्त्र